नेपालमा एकैदिन को’रोनाले २ जनाको मृ’त्यु पुष्टि, मृतकको संख्या ३४ पुग्यो – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/नेपालमा एकैदिन को’रोनाले २ जनाको मृ’त्यु पुष्टि, मृतकको संख्या ३४ पुग्यो
काठमाडौं । नेपालमा को’रोना भा’इरस (कोभिड—१९) बाट थप २ जनाको मृ’त्यु भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार गोरखाको पालुङटारका १ र रुपन्देहीका १ जनाको कारो’नाका कारण मृ’त्यु भएको हो।
मन्त्रालय प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार गोरखाको पालुङटार ७ का ४४ वर्षिय पुरुषको आज विहान उपचारका क्रममा मृ’त्यु भएको हो । असार १७ गते कतारबाट आएका उनी पालुङटारकै क्वारेन्टिनमा बसेका थिए।
१८ गते स्वाव संकलन गरी को’रोना परीक्षण गरिएकोमा हिजो पोजेटिभ देखिएको थियो । उनी मधुमे’हका दि’र्घरोगी रहेको भएको र निमोनिया देखिएपछि गोरखा अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो।
यस्तै रुपन्देही देबदहका ७५ वर्षका वृद्धको पनि को’रोनाका कारण मृ’त्यु भएको प्रवक्ता डा. गौतमले बताउनुभयो । क्षयरोगका विरामी उनी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत थिए । उपचारकै क्रममा उनको असार १८ गते मृ’त्यु भएको हो।
असार १८ गते मात्रै को’रोना पुष्टि भएको थियो । योसँगै नेपालमा को’रोनाबाट मृ’त्यु हुनेको संख्या ३४ पुगेको छ ।
शनिबार नेपालमा २ सय ३२ जना नयाँ को’रोना संक्र’मित थपिएका छन्। योसँगै नेपालमा सं’क्र’मितको संख्या १५ हजार ४ सय ९१ जना पुगेको छ।
प्रवक्ता डा. गौतमका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा भएको परीक्षणमा १ सय १४, विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएको परीक्षणमा मा ७ जना, कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा ७, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाल विराटनगरमा भएको परीक्षणमा ४ र गजेन्द्र नारायणसिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा ५१ जनामा को’रो’ना पोजेटिभ देखिएको छ।
यस्तै, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाल जनकपुरमा भएको परीक्षणमा १५ जना, भरतपुर अस्पताल प्रयोगाशाला चितवनमा भएको परीक्षणमा १३ जना, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र पोखरामा भएको परीक्षणमा ८ जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाल रुपन्देहीमा भएको परीक्षणमा ५ जना, भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा भएको परीक्षणमा ७ जना र दैलेखमा प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा १ जनामा को’रो’ना पोजेटिभ देखिएको उहाँले बताउनुभयो।
पीसीआर विधिबाट शनिबार ४ हजार ५० जनाको को’रोना परीक्षण भएको छ।
सार्कराष्ट्रमध्ये मध्ये कोरोना परीक्षण दर प्रति १० लाखमा भारत श्रीलंका पाकिस्तान भन्दा नेपाल अगाडी रहेको उहाँले बताउनुभयो।
अहिले देशभरीका विभिन्न क्वारेन्टिनमा ३३ हजार १ सय २५ जना रहेका छन्। विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनहरुमा ९ हजार ४२ जनाको उपचार भ’इरहेको छ।
शनिबार २ सय ७१ जनासँगै आजसम्म ६ हजार ४ सय १५ जना सं’क्र’मणमुक्त भएर घर फर्किएका छन् ।
यी ४ राशिका व्यक्तिको दिमाग चल्छ कम्प्युटर भन्दा पनि तेज, तपाईको राशि कुन ?
आईपीएल : हैदरावादसँग चेन्नई ७ रनले पराजित